Ny Broker Real Estate Estate ary ny EnTrust & Title Ltd dia miara-miasa mba hanolotra fifanakalozam-bola azo antoka sy azo antoka eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra.
enTrust and Title no orinasa voalohany Escrow & Title Conveyance Company ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Ny fahazoan-dàlana dia neken'ny RERA sy ny Departemantan'ny tany Dubai.
Ny orinasa dia manome fomba tsotra, azo antoka, mora ary mahomby hanamorana ny famindrana ny fananana. Ny loharanom-pahalalana manan-danja amin'ny fanandramana lalina, ny fahatokisan-tena, ny fahatokisana, ny filaminana sy ny fiadanan-tsaina ho an'ny tetikasa goavana sy indraindray mampihetsi-po amin'ny fividianana sy fivarotana na fanofana / fandefasana trano.
Ho setrin'ny fanambin'ny tsenam-barotra, ny drafitra ataon'ny orinasa dia manome fiarovana ny mpividy, mpivarotra, tompon-trano ary mpiharo. Ny olan'ny fananana ara-dalàna, ny fahefana handrafitra ny fifanekena, ny fisoratana anarana, ny fanendrikendrehana, ny fanambarana ara-bola, ary ny tsy fisian'ireo antotan-taratasin-taratasim-panafody amin'ny fotoana ho an'ny fivarotana, dia tapa-kevitra amin'ny fampiasana ny orinasa enToe-draharaha azo itokisana.
Ny firoboroboan'ny orinasa momba ny teknôlôjian'ny zavakanto toy ny fanamarinana biometrika nomena ny fanapaha-kevitr'ireo manampahefana rehetra dia mampihena ny risika ara-bola amin'ny Mpividy, Mendri-kaja na Mpisambotra. Ny orinasa dia miantoka ny kalitaon'ny serivisy amin'ny fanomezana antoka tsy misy fepetra sy azo havaozina mba hahazoana antoka ny famindrana ny Lohateny amin'ny alàlan'ny fifanakalozana.
Amin'ny maha-antoko fahatelo tsy miankina, ny orinasa dia miara-miasa amin'ny Mpitahiry, Agent, Mpisolovava, Mpikirakira ary mpampindram-bola. Ny tolotra nataony dia azo ampiasaina amin'ny trano, trano, trano, na orinasa iray.
enTrust & Title dia tarihan'ny manampahefana manana fahalalana momba ny sehatra matihanina ary mihoatra noho ny taona 23 traikefa tamin'ny fanomezana asa toy izany tany Kalifornia.